आयो पेट्रोल होइन हावाबाटै चल्ने मोटरसाइकल ! – Ujyaalo Patrika
आयो पेट्रोल होइन हावाबाटै चल्ने मोटरसाइकल !
मानिसहरु दिनप्रतिदिन अनेक खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् ।
यस्तो खोजमा उनीहरुले केही न केही सफलता हात पारिरहेका हुन्छन् । यस्तै हालै भारतमा एक जनाले हावाबाट चल्ने मोटरसाइकलको निर्माण गरेका छन् ।
भारत लखनउका एक वैज्ञानिकले एअर बाइकको आविष्कार गरेका हुन् । उनले करिब ९ वर्ष पहिला एउटा एअर इन्जिनको आविष्कार गरेका थिए । जसले अहिले आएर एअर बाइकको रुप लिएको छ ।
यो आविष्कारले बढ्दो ग्लोबल वार्मिङ समस्यासँगै आम मानिसको कम खर्चमा बाइक चढ्ने रहर पूरा गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
एअर बाइक तयार गर्ने वैज्ञानिकको विश्वास छ कि यो बाइक सञ्चालनमा ल्याउन सके इन्धनको खपत पनि कम हुनेछ र ग्लोबल वार्मिङको समस्या पनि कम हुँदै जानेछ ।
भारतराज सिंहले निर्माण गरेको आविष्कारमा धेरै खर्च लागेको जनाइन्छ ।उनी हाल एउटा इन्जिनियरिङ कलेजमा एसोसिएट डाइरेक्टर छन्। उन लाई विश्वास छ कि यदि उनको यो आविष्कार सञ्चालनमा आए प्रदूषण ५० प्रतिशतले घट्नेछ ।
यो आविष्कारको मुख्य उद्देश्य भनेको गाडीमा पेट्रोल वा डिजल प्रयोग गर्नुको साटो तिनलाई हावाबाट चल्न इन्जिन तयार पार्नु नै हो ।
उनले एउटा आल्मुनियमको सिलिन्डर बनाएर त्यसलाई जडान गरेर हावाबाट चल्ने इन्जिन बनाएका छन् । त्यो इन्जिनको प्रयोग पहिला उनले बाइकमा गरे । जुन निकै सफल रह्यो । सिंहका अनुसार यो इन्जिन जडान गरेर चलाइएको बाइकले केबल ५ रुपैयाँमा ४० किलोमिटरको यात्रा आरामले सफर गर्न सकिन्छ ।
हावाबाट चल्ने इन्जिनले बाइकको गतिमा खासै नकारात्मक असर पारेन । यो इन्जिनिजडित बाइक प्रतिघन्टा ७०–८० को गतिमा सजिलै चलाउन सकिन्छ । सिंहले आफ्नो यो आविष्कारलाई वैधानिकता दिन भारत सरकारसमक्ष पत्र समेत पठाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
Previous तपाईंलाई थाहा छ ? यी कुरा महिलाले पुरुषसँग सँधै लुकाउछन्
Next एक श्रीमानको ३९ श्रीमती , एकै घरमा बस्छन् १ सय ८१ जनाको परिवार